बिट्कोइन के हो त?? बिट्कोइन कमाउन चाहानुहुन्छ ?? - Prem "Nischal"
Home / coinbase / earn bitcoins / earn bitcoins online with your mobile / earn online / बिट्कोइन / बिट्कोइनको वालेट / बिट्कोइन के हो त?? बिट्कोइन कमाउन चाहानुहुन्छ ??
बिट्कोइन के हो त?? बिट्कोइन कमाउन चाहानुहुन्छ ??
Prem Kumar Shrestha September 08, 2019 0
बिट्कोइन के हो त??
बिट्कोइन डिजिटल पैसा हो जुन 2009 मा सातोसी नाकामातोले निर्माण गरेका थिए।
बिट्कोइन इन्टरनेटमा चलेको पैसा हो, जुन विश्वव्यापी रुपमा विकेन्द्रित रहेको छ। । बिट्कोइन अरू देशको मुद्रा जस्तै डलर, पाउन्ड स्टरलिङ्ग, इउरो जस्तैे हो। तर बिट्कोइनलाई कुनै केन्द्रित निकायले नियन्त्रण गर्दैन डलर या पाउन्ड जस्तो।
त्यसकारण पनि यो विश्व भरि प्रचलित छ। आजकाल धेरै संस्थाहरूले यसलाई अपनाइसकेका छन्। जापान पहिलो राष्ट्र बन्यो जसले बिट्कोइनलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकारेर कानुनी मान्यता दियो।
यदि बिट्कोइन कमाउन चाहानुहुन्छ भने के गर्ने त???
बिट्कोइन जम्मा गर्ने या कारोबार गर्ने हो भने तपाइलाई बिट्कोइनको वालेटको आवश्यकता पर्दछ। जाहाँ तपाइले बिट्कोइन पठाउन र पाउन सक्नुहुन्छ। बिट्कोइन वालेटको लागि कोेइनवेस(coinbase) सबैभन्दा चलेको साइट हो। कोइनवेसमा रजिष्टर गर्न याहाँ जानुहोस् -->> https://goo.gl/Y5GtTz
जस्तै तपाई इमेल पाउन आफ्नो इमेल address दिनुहुन्छ र त्याहाँ तपाई इमेल पाउनुहुन्छ। बिट्कोइनमा पनि तपाईलाई एउटा बिट्कोइन एड्रेस दिइन्छ, जुन अङग्रेजी अल्फाबेट र नम्बरको मिश्रण हुन्छ। जस्तै 1FmVefncL5SnrtJafEKTnS9MrhhAWVxhxi
यदि तपाइहरुले यो bitcoin address मा बिट्कोइन पठाउनु भएमा वालेटमा आइपुग्छ।
अहिले किन सारा संसार बिट्कोइनको पछाडी छ त??
बिट्कोइनको आविष्कारसँगै विस्तारै यसको भाउ नि बढ्दैछ। त्यसैले मानिसहरू यसलाई किनेर सञ्चय गर्दैछन्। अहिले विश्व बजारमा बिट्कोइन सूनभन्दा महँगिएको छ र विश्लेषकहरूको अनुसार यो 2017 सालको अन्तयसम्म प्रति एक बिट्कोइन 3000 डलरभन्दा माथि हुनेछ।
तपाईले बुझ्नु पर्ने कुराहर :
1 बिट्कोइन 100000000 सातोसी हो।
सातोसी बिट्कोइनको सानो रूप हो। जस्तै हाम्रो रूपैयाँको पैसा हो। 100 पैसा 1 रूपैयाँ जस्तै।
तसर्थ हामी सबै बिट्कोइन खरिद गर्न सक्दैनौ तर यसको मतलब तपाईले बिट्कोइन पाउनै नसक्ने होइन। यो अनलाइन जब्स नेपालको वेबसाइटबाट विभिन्न तरिकाले बिट्कोइनस् कमाउने उपायहरू बताउने छु।
Earn bitcoins online with your mobile
अब बिटकोइन्स तपाइको कोइनबेस वालेटमा जम्मा भयो। अब मैले हातमा कसरी पैसा पाउँछु त?
बिट्कोइन्सबाट तपाई आफ्नो मोबाइल रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ।
बिट्कोइन्सबाट तपाई विभिन्न अनलाइन साइट्सबाट सामान खरिद गर्न नि सक्नुहुन्छ जुन कुरियर मार्फत पाउन सक्नुहुन्छ।
-अब, हैन तपाई मैले कमाएको बिट्कोइन्स मेरै हातमा पाउन चाहानुहुन्छ भने त्यो पनि सम्भब छ।
Δ तपाईको बिट्कोइन्स डलरसँग साट्न सक्नुहुन्छ र साटिएको डलर Bank Wire मार्फत payza, skrill, perfect money बाट आफ्नो बैँक खातामा झिकाउन सक्नुहुन्छ।
©सबै भनदा सजिलो तरिका चाहीँ, नामक साइटबाट virtual debit card मगाउन सक्नुहुन्छ। सो कार्डबाट सामान खरिद गर्न सक्नुहुन्छ या विभिन्न ATMबाट नगद नै लिन सक्नुहुन्छ। कार्ड रजिष्टर गर्नलाई याहाँ जानुहोस्--
There are many other ways to earn bitcoins online. If your are interested to earn bitcoins email me at loveofpari@gmail.com
Viber : +977 - 9813359953
coinbase earn bitcoins earn bitcoins online with your mobile earn online बिट्कोइन बिट्कोइनको वालेट